Foostada Clam Shell Co-rotating Twin Screw Extruder
Buuxiyayaal kala duwan oo caag ah, isku -darka polymer (daawaha caagga ah), midabaynta caagga ah, iwm
Balaastikada injineernimada ee kala duwan oo xoojinaysa dhalada galaaska, guntimaha dib-u-bilawga ah
Noocyada bakteeriyada kala duwan, dahaaran, adkaysi u leh adeegsiyo gaar ah
Qalabka filimada iftiinka/bayoolojiga, balaastikada magangalyo-doonka ah iyo walxaha filimada ka hortagga ceeryaanta oo badan, iwm.
Qalab gaar ah oo loogu talagalay baabuurta iyo qalabka guriga iyo qalabka fiilada, iwm
Elastomers Themoplastic, sida TPR, TPE, iyo SBS, iwm
Kiniiniyada dib-u-soo-saarka ee xabbadaha hawo-mareenka ah ee PVC, xabagta ku-milmaysa kuleylka, iwm
1.Foostadu waxay la mid tahay clamshell, kaas oo si sax ah u xakamayn kara waqtiga balaastigga iyo heerka balaastikada ee maaddada, fududeynaysa fiirinta natiijooyinka imtixaanka iyo shaqada nadiifinta baaritaanka kadib oo kordhisa waxtarka wax soo saarka.
2.Foostada iyo furku waa nashqad moodal ah, oo si xor ah loo ururin karo si loo buuxiyo shuruudaha ka -shaqaynta qalabka kala duwan.
3.Waxa loo adeegsan karaa oo keliya ka shaqaynta iyo adeegsiga balaastikada kuleylka, laakiin sidoo kale kuleylinta iyo isku darka hababka kuleylka kuleylka sida resin epoxy iyo resin phenolic.
4.It waxaa lagu dabaqaa wax -ka -qabadsiinta cadaadiska, wax -ka -beddelka wareejinta, wax -ka -beddelka extrusion iyo mashaariicda kale ee wax -ka -beddelka, kaas oo leh faa'iidooyinka saxnaanta sare iyo kala -tagga fudud.
5.Foostada waxaa lagu furi karaa daqiiqado gudahood. Tani waxay ka dhigaysaa beddel badeecadda, dayactirkeeda iyo cilmi -baaristu mid dhakhso leh oo fudud. Labada boolal iyo foostooyinka labadaba waxaa loogu talagalay in la adeegsado mabda'a dhismaha. Qaab -dhismeedka isku -xidhka, dejinta foostada, quudinta iyo hawo -qaadista, beddelidda shaashadda, habka loo qoondeeyey iyo shuruudaha hannaanka, iyadoo la tixgelinayo kartida mashiinka ee codsiyada kale ee guud.
Nooca Ballaca (mm) Samee/Di L/D RPM (ugu badnaan) Awood (kw) Soo saar (kg/saac)
Hore: CD Taxanaha extruder hal fur
Xiga: CTS-C Taxanaha Twin Ku marooji Extruder